Itoobiya oo hubeynayso Falaago Reer Suudaan ah - Awdinle Online
Ciiddanka Dowladda Sudan waxay ku eedeeyeen Dowladda Ethiopia inay hubeynayaan Dhaqdhaqaaq Fallaago ah, si ay u qabsadaan magaalladda Kurmuk ee Gobalka Blue Nile ee K/Bari ee Sudan.
Ilo Milliteri oo ka tirsan Ciiddanka Sudan waxay ku eedeeyeen Dowladda Ethiopia inay Taageero Hub, rasaas iyo qalab Milliteri siinayaan Dhaqdhaqaaqa Falaagada ee uu hoggaamiyo Joseph Touka.
Ethiopia waxay kaloo u ballan qaaday Fallaagadaasi inay Ciiddanka Ethiopia ka taageeri doonaan Duqeymaha Madaafiicda, si ay Kooxda Joseph Touka u qabsadaan magaalladda Kurmuk ee Sudan.
Ilaha Milliteri ee Dowladda Sudan waxay sheegeen in qorshaha Ethiopia u hubeynayso Kooxdaasi tahay sidii uu Joseph Touka u qabsan lahaa magaalladda Kurmuk, iyadoo Madaafiicda Ethiopia ka taageerayaan Duullaankaasi.
Ethiopia waxay doonaysaa inay dhabar-jebin ku sameeyaan dadaalka Ciiddanka Sudan ka wadaan Aagga Bari ee u dhow Xuduudka ay labada Waddan isku khilaafsan yihiin.
Joseph Touka ayaa Taliye u ah Dhaqdhaqaaqa Shacabka ee Qeybta Ciiddanka Waqooyi (The Popular Movement / Northern Sector forces) ee uu hoggaamiyo C/Casiis Al-hilu, waxa uu tan iyo sanadkii 2011-kii Ciiddanka Dowladda Sudan kula dagaalamayey Goballada Koonfurta Kordofan ee Koonfurta Sudan iyo Blue Nile oo ku yaalla K/Bari ee dalka Sudan
Bishii October ee sanadkii hore, Heshiis Nabadeed ayaa waxaa wada saxiixday Dowladda Sudan iyo Wakiillo ka kala socday Dhaqdhaqaaqyada Hubeysan ee ka tirsan Isbahaysiga Jabhadaha Kacaanka (The Revolutionary Front Alliance).
Bilihii la soo dhaafay, Dowladda Ethiopia waxay ku eedeysay Ciiddanka Dowladda Sudan inay la wareegeen maamulista Degaano ka tirsan Ethiopia, balse, Dowladda Sudan waxay sheegtay inay Ciiddankooda dib ula wareegeen Deegaano ka tirsan dalka Sudan, oo ay horey u joogeen Maleeshiyo iyo Beeraley Ethiopian ah.
Previous articleCarruur Gaajo ugu geeriyootay degaan katirsan Gobolka Gedo
Next articleGuddiga dowladda Soomaaliya ku matalaya dacdda Badda oo ka dhoofay dalka